Posted by သက်တန့်ချို at 4:52 PM3comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 4:42 PM 8 comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:13 AM6comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:27 AM 1 comment:
Posted by သက်တန့်ချို at 10:23 AM 1 comment:
ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ ဖုန်းတွေ ( CDMA 800 ) ကို ခွဲတမ်းအရ မဲနှိုက်ရမယ်ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်တွေထောင်ထားပါတယ်
ဖုန်းအလုံးရေပမာဏက ဆယ်ဂဏန်း လိုချင်သူကရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီနေပါတယ်
တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေလက်ထဲမရောက်ပဲ ကြားထဲက ပွဲစားတွေနဲ့လုပ်စားတွေလက်ထဲမရောက်သွားဘူးလို့
၀ယ်လိုအားနဲ့ ရောင်းလိုအား မမျှတဲ့အခါ အရင်လိုပဲ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေဦးမှာပါပဲ
၁ ။ အခြေခံလိုအပ်တဲ့ ပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီး Infrastructure တွေ တည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါ ရပ်ကွက် အင်အားအလိုက်
၂ ။ လျှောက်လွာခတွေနဲ့ မိတ္တူကူးခတွေ သက်သာအောင် လွယ်လွယ်ကူကူ ( နိုင်ငံခြားမှာလို ရော့ပတ္တမြား ရော့နဂါး ) ၀ယ်လို့မရသေးဘူးလား
၃ ။ Internet speed တွေကရော သိန်းလေးဆယ်တန် ၊ ဆယ့်ငါးသိန်းတန် ၊ ငါးသိန်းတန် ၊ နှစ်သိန်းတန်ဖုန်းတို့လို အတူတူပဲလား အတူတူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်
၄ ။ လျှောက်လွှာတင်တဲ့စနစ်ကြီးနဲ့မဲဖောက်တဲ့စနစ်ကို ပယ်ဖျက်ပြီး တကယ်လိုချင်တဲ့သူတွေ ရဲ့ဝယ်လိုအားကို လိုက်မှီအောင်စစ်ပြီး ရောင်းလိုအားကိုတိုးပေးလို့မရဘူးလား
၅ ။ ကြားပွဲစားတွေနဲ့လုပ်စား တွေကြောင့် တကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံလူတန်းစား တစ်ရပ်ဆီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ ဘယ်သူ အာမခံပါသလဲ
တွေးမိတာလေးတွေပါ ။ သူမရလို့ငါမရလို့ ဖြစ်ကြဦးမယ် ။ သူကတော့မဲပေါက်လို့ ဖုန်းနှစ်လုံးဖြစ်သွားပြီ ငါကတော့တစ်လုံးမှမရှိဘူး မဲလည်းမပေါက်ဘူး ဒါလေးစောင့်နေပါတယ် လျှောက်လွှာတင်နှိုက်တော့လည်း မဲမပေါက်ဘူး ဆိုပြီး ဒုံရင်း ဒုံရင်းဘ၀ပဲရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ရော . . ။
ကျုပ်လောဘကြီးနေတာပါ တကယ်တော့ ၀ုန်းကနဲ ရောင်းလိုအားကို ပြည်သူတွေအတွက် ပြည့်မှီအောင်လုပ်ပေးဖို့ဘယ်လွယ်ပါ့မလဲလို့ ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍကို ဖေးဖေးဆဆ တွေးမိပေးပါတယ်
အဟုန်နဲ့တော့ . . . လုပ်စေချင်နေမိပြီ
သား . . အားနာလိုက်တာ . .အဖေ
သာမန် မထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေ့
နှင်းတွေ အေးခဲစွာ ပျံ့ကျဲ
ကျနော်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ရင်ခွင်နဲ့အတူ
လူ့လောကထဲ . . . ရောက်ရှိခဲ့
ဒီလိုနဲ့ . .
အဆင်မပြေမှုနဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေကို အချိုးချ
နေသား မကျလိုက်တာ . .အဖေ
ချွေးသံရွဲရွဲ့ နဲ့ အိပ်မက်တိုင်းမှာ မိသားစုအတွက်
သား . .သွား . .ဝေးဝေးမှာ သွားဆော့စမ်း
ဂရုဏာတရားနဲ့ အဖေ့ ခြိမ်းခြောက်မှုအောက်
ကျနော်ကျပျောက်ခဲ့သော . . . အသိတရားမှာ
အရာရာ . . မိုးနဲ့မြေ
ကျနော်ခွေယိုင်လုဆဲ . .
အဖေ့ကမ်းလက် . ..
ငါ့သားကြီးအတွက် . . ဘိုအုန်းသီးစက်ဘီးတဲ့
ဟေ့ . .ငါ့သား ၄ ဘာသာနဲ့ ဂုဏ်ထူးကွ
အဖေ့ကို သား . .အားနာလိုက်တာ အဖေ
အခုတော့ . .
သံသရာမှာ ခရီးရှည်ကြီးထွက်သွားခဲ့ပေါ့ . . .
ညှိုးနွမ်းမှုနဲ့အဖေ့မျက်နှာမှာ စကြ၀ဌာလောက် အားမာန်တွေရှိတယ်
ငြိမ်းအေးမှုနဲ့အဖေ့သွင်ပြင်မှာ ပင်လယ်ကြီးလောက် မေတ္တာတရားတွေရှိတယ်
ရင့်ကျက်မှုနဲ့ အဖေ့စကားသံတွေမှာ ကောင်းကင်ကြီးလောက် ကျယ်ပြန့််နက်ရှိုင်းတယ်
ဘာတွေနဲ့ ဖြည်ဆည်ရဦးမလဲ အဖေ . . .
အဖေလိုသမျှ သား . .ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ရဲ့လား
အဖေ မှန်သမျှသား . . လိုက်မှန်နိုင်ခဲ့ရဲ့လား
အဖေ့လို တရားနဲ့ ဓမ္မ ချိန်ခွင်အောက်
သား. . လျှောက်လှမ်းနိုင်ရဲ့လား
အခုတော့အဖေ . .
သား ညတွေ . .နက်သထက် နက်လာပြီပေါ့ အဖေ
သားကို ချစ်လိုက်တာလို့ ယုယမှုမရှိဘူး
အဖေ့ကို ချစ်လိုက်တာလို့ ထွေးပွေ့ မှုမရှိဘူး
အလိုပါဘူးအဖေ . .
အခုတော့ အဖေ လူလုံးမှ လှခဲ့ရဲ့လား
သား . .
အဖေက သစ္စာဒီပက ယောဂီ
သား . . . မှားနေခဲ့တာလား အဖေ
ကျနော့်ဆီမှာ ၂ ပေမီးချောင်းလေးရှိတယ်
၄ ပေ မီးချောင်းလေးပြောင်းတပ်တော့အဖေကပြောတယ်
အခန်းက လင်းလွန်းတယ်ကွာတဲ့ . .
ငါက ရိုးရှင်းတာပဲကြိုက်တာကွာ . .တဲ့
ငါက အေးမြတဲ့ သင်ဖြူးဖျာလေးပဲကြိုက်သတဲ့
အဖေက . . .သူမြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့
သေသူကို ရှင်သူတို့ မျက်ရည်ခတဲ့ပွဲ
သွားသူကို ကျန်သူတို့ နှုတ်ဆက်တဲ့ပွဲ
ထားသူကို နေခဲ့သူတို့ လက်ပြသူတို့ပွဲ
အဖေနဲ့အတူ တစ်ခရီးတည်းသွားချင်လိုက်တာ . .
တရားရှာ ကိုယ်မှာ သိသတဲ့
သား . . အယောင်ယောင်အမှားမှား
ဒီဘ၀ဟာ ဒါဏ်ရာတွေ ပရပွနဲ့
အို . .ခါးလိုက်တာ . . အဖေ
သင်္ခါရတရား ဟာ လှပစွာပဲ
အငှား ခန္ဓာ တွေနဲ့
တစ်နေ့တော့ ထားခဲ့ရမှာ ပ . .
ကျနော် နားလည်ပါတယ်အဖေ . .
အစ တစ်ခုရဲ့ နိဂုံး ပိုင်းသာဖြစ်တယ်
သေခြင်းဆိုတာ အမှောင် ထု မဟုတ်
အလင်းတစ်ခုရဲ့ အာရုဏ် ဦးသာဖြစ်တယ်
ပြီးဆုံးခြင်းအတွက် ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်
ကျနော်သေသွားလည်း ဘာများ ပါလာမလဲ
အသိဥာဏ်ကို အမိုက်မှောင်တော့ မဖုံးပါဘူး အဖေ
အဲဒီနေ့လည်ခင်းဟာ ကောင်းကင်ဖြူဖြူမှာ တိမ်ဖုံးသွားတဲ့အခိုက်
မငိုပါဘူးအ ဖေ . . ကျနော် မငိုပါဘူး
ဆင်ခြင်သုံးသပ် လို့ အမှန်တရားကိုလက်ခံဖို့အတွက်
ကျနော်တို့အားလုံး မကြာခင် တစ်ခန်းရပ်ကြရမယ်
သား တွေသမီးတွေ မြေးတွေ အားလုံးထားခဲ့
ဒါဟာ . . ဘ၀ ပါပဲကွယ်
ိကျနော် မြေ၀ယ်မကျ နားထောင်ပါ့မယ်အဖေ
အဖေ နှစ်သက်တဲ့ . . တရား ဓမ္မ တွေနဲ့
သား ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမှာပါအဖေ . . ။
အဖေ့အတွက် နောက်ဆုံးခရီးလိုက်ပါပို့ဆောင်တုန်းက ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ရွတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဗျာလေးပါ ။
(အဖေ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သားသမီးများ အားလုံးကိုယ်စား ရေးဖွဲ့ခဲ့ပါတယ် )
Posted by သက်တန့်ချို at 11:38 PM 20 comments:
နွယ် . . . နှင့် . . ရင်
အချိန်အခါမဟုတ် အိပ်မက်တွေကို ၀ုန်းကနဲ ဖန်ဆင်းပစ်လိုက်တယ်
နေ့ရယ် ညရယ် အတိတ်ရယ် အိပ်မက်ရယ်
ထိပ်ထားရယ် . .
ငါ့ကို . . . နွယ်ပါ . .
အိပ်မက်ကောင်းကင်မှာသာ . . .
နင့်အတွက် မျှော်လင့်ခြင်းတွေ တပွေ့တပိုက်
ခက်တာပဲ . .
ငါကလည်း ညနေခင်းတစ်ခုတောင် ရူးသွပ်ခုံမင်နေရသူ
နင်က ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်ပါ
အမှောင်က ဘယ်လောက်ပဲနက်ပါစေ . . .
ဒီလူက . . . အရာရာ နတ္ထိ
ဘ၀ဆိုတာ ဘာဆိုဘာမှ မသိချင်တဲ့ကောင်
အမှောင် ထုထဲ . . နင်းကာဆင်း . .
တစ်ခါမှလည်း မလင်းခဲ့ရ . .
ထိပ်ထားရေ . .
နွယ် . . တဲ့ . .ရင်မှာ
မလွယ်တဲ့ . . . အသိ. .
ငြိငြိ. .သော . . .မိုး . . .
တိုး. . .တိုး. . .ရွာ စေ . . ကွယ်
Posted by သက်တန့်ချို at 8:48 PM6comments:
Posted by သက်တန့်ချို at 11:59 PM 10 comments: